Halbeegyada lagu tixgaliyo gadashada iyo iibinta NFT - Cazoo
Bogga ugu weyn » Bogga ugu weyn » Halbeegyada lagu tixgaliyo gadashada iyo iibinta NFT-yada
Tag: Binance, saqafka NFT, Qiimaha dabaqa, NFT, Naadirka, Qandaraasyada smart
Waqtiga akhriska: 5 minuti
Markaad dooranayso iibso ama iibiso NFT waa inaad maskaxda ku haysaa halbeegyada aasaasiga ah si aad u qiyaasto qiimaheeda suurtagalka ah.
Waxaan tirinayaa sideed, sideed cabbir oo muhiim ah si aan u tixgeliyo marka la qiimeeyo qiimaha dhabta ah ee NFT:
qiimaha ugu yar
qiimaha ugu badan
Ma in aad ku biirto NFT horaanta mashruuca mise waa in aad sugtaa oo aad hadhoow iibsato?
Qiyaasaha qiimaynta NFT
Darajo naadir ah
Doorkee NFT-yadu ka ciyaari karaan faylalkaaga?
3 talo oo lagu dhisayo faylalka NFT ee guuleysta
NFT-yadu waxay qabsadeen intarneedka dabaylo, mana muujinayaan calaamado hoos u dhac ah. Iyada oo ay kor u kacday caannimadiisa, ma jirto yaraanta mashaariicda NFT ee la bilaabay maalin kasta.
Go'aaminta qiimaha saxda ah ee NFT way adkaan kartaa. Si kastaba ha ahaatee, si loo qiimeeyo cimri dhererka iyo qiimaha mashruuca NFT ee faylalkaaga, waxaan xiiseynayaa inaan tilmaamo inay jiraan cabbirro muhiim ah oo gacan ka geysan kara hagida istaraatiijiyada maalgashiga. iibsashada iyo iibinta NFTs jihada ka wanaagsan.
Meesha NFT dhexdeeda, qiimaha sagxaddu waa kan ugu qiimaha hooseeya ee NFT gudaha mashruuca NFT.
"Iibsashada dabaqa", sidaas darteed iibsashada dhulka, waxaa loo tixgeliyaa istaraatiijiyad bilow wanaagsan, maadaama ay tahay meel la heli karo oo loogu talagalay dadka cusub ee ku biiraya mashruuca NFT .. qiimuhu wuxuu noqon doonaa kan ugu hooseeya.
Sababtoo ah waa muhiim?
Qiimaha sagxadda ayaa ah mitir wanaagsan oo lagu qiimeeyo sida ugu wanaagsan ee mashruuca NFT ay bulshadu u heshay. Marka dalabku kordho, qiimaha ugu yar ayaa kor u kici doona.
Sidaa darteed, haddii aad iibsato NFT-da ugu jaban ee ururinta iyadoo la filayo in ay noqon doonto mid caan ah, waxaad markaa dib u iibin kartaa NFT marka qiimaha ugu yar uu sarreeyo.
Hadafka wanaagsani waa in la helo mashruuc dheellitiraya qiimaha sare iyo helitaanka. Iyadoo mashaariicda leh qiimaha salkoodu sarreeyo ay qiimo badan yihiin, waxay aad ugu adag tahay ganacsatada yaryar inay awoodaan.
Qiimaha "farshaxan" ee NFTs
Qiimaha NFT oo leh qiimaha ugu sarreeya ee ururinta ama qiimaha ugu sarreeya ee NFT ayaa lagu iibiyay.
Iibka qiimaha ugu sarreeya waxaa loo tixgelin karaa khatar sare, istaraatijiyad ganacsi oo NFT abaal-marin sare leh.
Haddii aad diyaar u tahay inaad lacag badan ku bixiso NFTs, isku day inaad iibsato saqafka NFTs, kaas oo ah qiimahooda ugu sarreeya. Badanaa kuwani waa alaabooyinka dhijitaalka ah ee ugu yar uguna caansan ee lagu iibiyo qiimaha ugu sarreeya.
Haddii baahida mashruucu korodho, qiimaha NFT-yada saqafka lagu rakibay ayaa cirka isku shareeri kara. Laakiin haddii mashruucu lumiyo rafcaankiisa, maalgashadayaasha doonaya inay iibiyaan waxay la kulmi karaan khasaare weyn maadaama dareeraha qallalan yahay.
Qiyaastan ayaa tilmaamaysa wadarta guud ee ganacsiga waxayna muujinaysaa baahida guud ee mashruuca.
Guud ahaan, ururinta la isku daray waxay leeyihiin qiyamka mugga ganacsiga ee sarreeya.
Mugga la iibiyay waa tilmaame wanaagsan oo muujinaya sida caanka ah ee ururinta NFT. Si ururinta u gaarto mug sare, dadku waa inay diyaar u yihiin inay wax iibsadaan oo iibiyaan.
Markaad eegto wadarta guud ee ganacsiga, qofku si fudud ayuu u go'aamin karaa haddii mashruuca NFT uu hadda ku jiro baahida. Markasta oo mugga sareeyo, dareeraha badan ee suuqa ayaa u muuqda inuu noqdo. Waxaad dooneysaa suuq dareere ah si aad si fudud u geli karto ugana bixi karto boosaska NFT.
Bixinta waxaa loola jeedaa tirada NFT ee ururinta.
Asal ahaan, abuure kasta oo NFT ah ayaa xakameynaya sahaydooda shaqo iyo heerka sicir-bararka.
Bixinta NFT waxay saamaysaa sida qiimaha ururinta loo arko. Ururinta leh sahay sare waxay u janjeertaa inay qiimo hoose u yeelato NFT kasta. Aruurinta sahayda hoose waxay inta badan leedahay qiime sare oo saldhig ah sababtoo ah naadir iyo yaraanta gabal kasta.
Il tirada iibka NFT waxay ka caawisaa maalgashadayaasha inay aqoonsadaan xiisaha hore iyo kuwa hadda ee ururinta NFT.
Haddii ururinta NFT ay muujiso wax badan oo iib ah dhawaanahan, waxay noqon kartaa calaamad muujinaysa xiisaha sii kordhaya. Si kastaba ha ahaatee, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo jihada dhaqdhaqaaqa ee la xidhiidha qiimaha ugu yar. Haddii dad badan oo haysta NFT ay iibiyaan oo qiimaha ugu yar uu hoos u dhaco, waxay muujin kartaa hoos u dhaca dulsaarka ama xitaa iibinta argagaxa.
Waa in aan xoogaa isbeddel ah yeesho.
La naadirka NFT waa la go'aamiyay iyadoo la eegayo sifooyinka iyo sifooyinka NFT ku leedahay ururinta la bixiyay. Qiyaastaani waxay sidoo kale tarjumi kartaa sida ay u adag tahay in la helo NFT gaar ah.
Darajooyinka naadirka ah waa mitir ka caawiya maalgashadayaasha inay qiimeeyaan sida qiimaha NFT-yadu ugu yeelan karaan ururin kasta.
Iyadoo la raacayo sharciga yaraanta, naadirka iyo baahida loo qabo NFTs waxay inta badan soo jiitaan iibsadayaal badan waxaana lagu iibiyaa qiime sare. Intaa waxaa dheer, NFT-yada leh darajo naadir ah ayaa laga yaabaa in lagu qalabeeyo agabyo NFT oo dheeraad ah, sida faa'iidooyin badan oo ciyaaraha lagu kasbado oo ay ciyaartoydu ka faa'iidaysan karaan.
Meel bannaan oo NFT ah, caddaynta waxaa lagu qeexi karaa sida taariikhda lahaanshaha ka dambeeya NFT laga bilaabo asalkiisa.
Provenance waa mitir muhiim ah oo loo isticmaalo in lagu qiimeeyo NFTs sababtoo ah waxay kuu ogolaaneysaa inaad xaqiijiso isbeddelada macluumaadka lahaanshaha ee dhammaan blockchain. Maalgelintaada waa la ilaaliyaa sababtoo ah asalka kaliya ayaa dib loogu noqon karaa abuurihii asalka ahaa.
Smart Contracts waa codsi ama barnaamij ku shaqeeya blockchain. Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah NFT-yada sababtoo ah waxay suurtogal ka dhigaan iibinta ama wareejinta hantida dhijitaalka ah, waxay dejiyaan royalties-ka fannaaniinta, u oggolaadaan isticmaalayaasha inay dhexgalaan metaverse, iyo in ka badan.
Qandaraasyada casriga ahi waxay qeexi karaan xuquuqda mulkiilaha iyo iibsadaha. Iyo sidoo kale ilaalinta silsiladda sahayda ama taariikhda wax kala iibsiga.
Marka la eego ilaalinta silsiladda sahayda, shuruudaha looga baahan yahay qandaraasyada caqliga leh waxay ku xidhan yihiin abuurihii asalka ahaa iyo iibsadaha. Iyadoo iibsadayaashu ay qaadanayaan lahaanshaha, maahan inay leeyihiin xuquuqda daabacaada ee NFT. Haddii aysan ahayn qayb ka mid ah shuruudaha qandaraaska, xuquuqda daabacaadda waxay ahaanaysaa qoraaga.
Si la mid ah maalgashi kasta oo kale, NFT-yadu waxay noqon karaan kala-duwanaansho faylaleed weyn.
NFTs waa dabaqa hantida dhijitaalka ah oo leh fursado aan xadidnayn. NFT-yadu waxay albaabada u furi karaan fursadaha kale ee ku dhex jira metaverse, iyo sidoo kale inay soo bandhigaan adduunka blockchain.
Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in dhammaan kuwa dhalaalaya aysan ahayn dheeman. Mashruucyo badan oo NFT ah oo soo koraya maalin kasta, si guul leh samaynta cilmi-baaristaada iyo qaadashada go'aan xog-ogaal ah ayaa gaar ahaan muhiim ah.
Kala duwi faylalkaaga
Dhammaan ukumahaaga ha wada gelin hal dambiil. Dhammaan NFT-yadu ma noqon doonaan guul. Kala duwanaanshaha faylalkaaga waxay wanaajin kartaa fursadahaaga samaynta maalgashi guul leh.
Ha ku bixin wax ka badan inta aad waayi karto
Waxaa lagu talinayaa inaadan ku bixin wax ka badan 10-20% wadarta kharashka faylalkaaga hal maalgashi. NFTs ma aha mid ka reeban.
Ka fir fircoonow bulshada NFT
Mashruuc kasta oo NFT ah oo aad xiisaynayso, waxa habboon in aad bulshada dhexdeeda firfircoon ka noqoto. Samaynta cilmi-baaristaada waxay kaa caawinaysaa kala soocidda maalgashiga wanaagsan iyo khiyaanada iman karta.
Qiimaha NFT-yada waxaa inta badan go'aamiya xoogagga suuqa, mana dhici karto in si sax ah loo saadaaliyo mustaqbalka NFT adduunka.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa suurtagal ah in la kordhiyo fursadaha guusha iyadoo la samaynayo cilmi-baaris sax ah oo suuqa ah iyo isticmaalka cabbirada kor lagu arkay. U isticmaal si aad si wanaagsan u qiimeyso oo aad ugu dhex marato booska NFT.
Maqaalka hore10-ka qadaadiic ee ugu wanaagsan sirta iyo sida loo iibsado
Maqaalka xigtaWaa maxay ururinta cusub ee NFT ee imanaya 2022?
Binance: Wareejinta deynta degdega ah ee wareejinta siligga SEPA
10-ka qadaadiic ee ugu wanaagsan sirta iyo sida loo iibsado
NFT: Tilmaamaha Dhameystiran ee Helitaanka 100x Xiga!